» पवित्राको दोहोरी बिग्रिएकै हो त ?
पवित्राको दोहोरी बिग्रिएकै हो त ?
१९ असार २०७८, शनिबार २०:१३
मकवानपुर, १९ असार । चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को बाह्रौँ दोहोरी भिडन्तमा निक्कै उतारचढाव हुने देखिएको छ । शनिबारका लागि लगातार तेस्रो प्रोमो सार्वजनिक भएसँगै यसले दर्शक श्रोताहरुलाई थप कौतुहलता जगाएको छ । तेस्रो प्रोमोमा दोहोरी भिडन्त भिडिरहेकी पवित्रा मगरको गीत बिग्रिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । प्रोमो अनुसार पवित्रले दोस्रो पक्षलाई जवाफ दिँदै गर्दै बिचमै गीत रोक्छिन् । उनले गीत रोकेसँगै शोमा सहभागीहरु आश्चर्यमा पर्छन् । उनी आफै नर्भस जस्ती देखिन्छन् र विपक्षी पक्षका दोहोरी प्रतियोगीहरुबिच पनि सन्नाटा छाउँछन् । उनी बिचमै रोकिएपछि कार्यक्रमकी अतिथि र उनीसँगै दोहोरी भिडिरहेका प्रशान्त तामाङ पनि चकित मुद्रामा देखिन्छन् ।
यो प्रोमोलाई नियालेर हेर्दा पवित्रा साँच्चै बिचमा रोकिएकी हुन् कि जस्तो लाग्छ । तर वास्तविकता के हो त्यस बारेमा भने शनिबार मात्र थाहा हुनेछ । यदि पवित्र यसरी रोकिएकी हुन् भने पवित्र र वसन्तलाई दोहोरी भिडन्तको नतिजामा केही घाटा हुनेदेखिन्छ । तर वास्तविकता के हो भन्ने बारेमा कौतुहलता पैदा भएसँगै शनिबारको यो दोहोरी भिडन्त दर्शकहरुका लागि रोचक हुने देखिएको छ ।
शनिबार बसन्त बिक र पवित्रा मगरको जोडी शर्मिला थापा र प्रशान्त तामाङको जोडीसँग भिड्दैछन् । बसन्त तनहुका र पवित्रा गुल्मीकी हुन् । त्यस्तै शर्मिला र प्रशान्त लमजुङका हुन् । यी दुबै जोडीहरु चर्चामा रहेका गायक तथा गायिकाहरु हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–